Igbo, Romans, Lesson 002 -- Identification and apostolic benediction (Romans 1:1-7) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 002 (Identification and apostolic benediction)
NDI ROM 1:1
1 Pọl, ohu nke Jizọs Kraịst, a kpọrọ ka ọ bụrụ onyeozi, onye kewara ozi ọma nke Chineke
Mgbe amuru Pol, enyere ya aha Sọl, eze di nganga na onye si n’ebo Benjamin. Ma mgbe onye mkpagbu nke ụka ahụ gosipụtara ebube nke Kraịst, ọ matara na ọ bụghị ihe ọ bụla. Ọ nakweere aha ahụ “Pol”, nke pụtara “onye nke nta”, wee jiri okwu ndị a malite ama: M, nke nta, abụrụ ohu Jizọs Kraịst.
Na nkwupụta ya na ya bụ ohu nke Kraist, Pọl kwenyere ịnwe nnwere onwe ya wee doo onwe ya n'okpuru onyenwe ya. O jiri obi ya nile wedaa ala ma wedata onwe ya ala, wee nwụọ n ’oke mpako ya, yabụ biri ebum n’uche nke mmụọ nke Kraist ma were oke ọ joyụ mezuo uche nke Onye-nwe-ya. Nke a putara na Kraist di ndu n’onwe ya bu onye dere akwukwo ozi a nye ndi Rome, mgbe o kpugheere ohu ya na-ege ya nti. Ot'odi, ekpughere Paul nkpughe a megide uche ya, kama site na obi odi nma na nnabata, nihi na Kraist adigh ndi kwere ekwe ohu, kama o rapuru ha inwere onwe ha; ikwere, na ihunanya, ma nwekwaa inwere onwe ya. Ha achoghi, ha achoro ka ha kewapu ya n'ebe ha no, n'ihi na obu ya bu ihu ha n'anya; ha kama idebere onwe ha n’ime ya.
E buliri Pọl elu gaa n'ọkwá dị elu na ọkwá na nsọpụrụ site na ịdị umeala n'obi ya dị ka ohu nke Kraịst. Onye-nwe-ya kpọrọ ya ka ọ bụrụ onyeozi ya ka o wee gbasaa alaeze ya n’etiti mba dị iche iche, na-enye Pol ikike na ikike, dịka ndị eze na ndị isi nyere ikike ma nye ndị nnọchi anya ha ma ọ bụrụhaala na ha na-eme n’iru na n’iru ha. N'ihi ya, Kraịst na-akpọ gị taa maka ozi ya. Mepee obi gị maka ọkpụkpọ oku Jizọs nyefere onwe gị kpamkpam nye ya n'egbughị oge, na nrube isi na obi umeala, ka ike ya wee wepụrụ gị n'aka ndị ọzọ. Dịka onye nnọchi anya Kraịst nke mba nile, Pol nwere ike iji akwụkwọ ozi ya gbanwee ụwa. O dighi onye, kari Kraist, kari Pol, “nke nta”.
Gịnị bụ ozi ọma Pọl, ohu nke Kraịst? Ma ọ bụ ozi ọma dị ebube nke Chineke. Pol ejighi echiche nke aka ya bia, kama o mere ka ozi oma mata uwa nkpagbu. N'oge Rom, okwu a bu “ozi oma” mara ndị Rom nke ọma. A na-eji ya n’ụlọ Rom nke Siza maka ịkpọsa ọrụ ọchịchị, ya bụ, mgbe a mụrụ nwatakịrị, ma ọ bụ mgbe ọ meriri ndị iro. Ya mere, okwu a na-egosi ikwusa ozi ọma na ezi na ụlọ nke ezi na ụlọ. Dika odi, Pol wetara ndi mmadu ozi oma nke Chineke, nagba akaebe banyere ọnụnọ nke Kraist, mmeri ya n’ebe ike na-emegide ya, na nsonaazụ nke nzọpụta ya, ka e wee doo ndị na-anụ ya nsọ, ma banye n’ezi omume Chineke.
Chineke dị nsọ kewapụrụ Pọl, onye ọka iwu, wee napụta ya n'ịbụ ohu nke ajọ onye ahụ. O mere nke a ka o wee napụta ndi nile butere olu ha n’okpuru yoke nke iwu site n’idegide ezi oru, ma weta ha rue oge amara, ka ha we ghara ibuputa onwe ha, kama ha bara n’eluigwe site Kraist, onye bu nani uzo nke n’eduba na Nna ya.
EKPERE: O Onyenwe anyi Jesu Kristi, anyi n’ekele gi n’ihi na ikporo ohu gi ohu Pol, zitekwa ya n ’uwa ka anyi nuru okwu gi site n’aka ya. Gbaghara anyị mpako na afọ ojuju anyị, ma nyere anyị aka iweda onwe anyị ala, ịbụ ndị ohu nke ịhụnanya gị, na imezu ndị kwere ekwe nke ụwa mezuo uche gị.
Gini bu aha ndi Pailat jiri onwe ya n’abuo mbu nke akwukwo ozi?
Page last modified on January 25, 2021, at 03:29 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)